Umaki: izihloko | Martech Zone
Isikhathi Sokushintsha Amasu Okumaketha nge-imeyili lapho…
ULwesine, May 8, 2008 NgoLwesihlanu, Okthoba 6, 2017 Douglas Karr
Ama-imeyili akho abukeka kanjena: Mhlawumbe umugqa wesihloko uphoqelela futhi wenziwe waba ngewakho esikhundleni se- "ChangeThis: Issue 46" Mhlawumbe eminye imigqa iyahlukana ukuze kungadingeki ukuthi ngigoqe njengoba ngifunda (angizange ngiyifunde, bekungenakwenzeka) . Mhlawumbe ama-imeyili we-Multi-part MIME ukuthumela umbhalo kulabo abafuna ukubukeka okusobala, kepha i-HTML kulabo bethu abajabulela i-imeyili eyakhiwe kahle. Mhlawumbe isingeniso esinamandla? Mhlawumbe isikhala esimhlophe phakathi kwezihloko kuya ku-
NgeSonto, ngoFebhuwari 3, 2008 NgoLwesine, ngo-Okthoba 29, 2015 Douglas Karr
Amakhasi ezinjini zezinjini zokusesha ezinama-algorithms anzima anesisindo setani lokuhlukahluka okuhlukile, kwangaphakathi nangaphandle kwekhasi lakho. Ngicabanga ukuthi kubalulekile ukubona ukuthi iziphi izinto ezibalulekile ezinakwa yi-Search Injini, noma kunjalo. Iningi lazo yizinto ozilawula ngokugcwele lapho uhlela noma udizayina isiza sakho noma umane ubhale ikhasi lakho. Lokhu akunandaba noma ngabe iwebhusayithi evamile yencwajana yokumaketha, ibhulogi, noma enye